Baolina lavalava – Nokianin’ireo mpilalaon’ ny Makis ireo mpanatsatso ny fandreseny - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Baolina lavalava – Nokianin’ireo mpilalaon’ ny Makis ireo mpanatsatso ny fandreseny
Nandeha be ny resaka fa «nangalarana vao nandresy ny Makis» ka nahatonga fofona ireo mpilalao sy mpanazatra ary mpitantana ny federasiona. «Fihevitry ny olona tsy tia tanindrazana izany. Raha tena tia tanindrazana izy ireo dia mba nandinika kely vao niteny izany. Ra no nilatsaka ary ratra betsaka no nanjo an’ireo mpilalaontsika tamin’iny lalao famaranana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ho an’ny baolina lavalava iny», hoy i Marcel Rakotomalala, filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina lavalava. Nanao teny mahitsy kosa i José Rakoto Harison, kapitenin’ny Makis omaly fa «ady no natrehina. Heveriko fa olona tsy tia ny fandrosoan’ny ekipam-pirenena no niteny izany”.
“Samy manana ny fahitany azy iny lalao iny. Ao ireo mijery mitongilana, ao ihany koa anefa ireo manana fijery hafa ka mba nitsinjo an’ireo mpilalao namono tena ho fakana izany. Heveriko fa nitovy tamin’izany ihany koa ny fomba fijery teo amin’ireo Malagasy fahiny tamin’ny ady nataon’ny Menalamba ho an’ny fitiavan-tanindrazana”, hoy i Berthin Rafalimanana na i Berthin Zoto, mpanazatra nasionaly. Nanterin’izy ireo kosa ny fisaorana ho an’ireo rehetra “nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka” izany fandresena izany. Isan’izany ny Fiadidiana ny tetezamita sy ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo renivohitra ary ireo mpanohana hafa. “Ny irariana dia ny hitohizan’izany hatramin’izay tanjona faran’izay tratra. HItohy amin’ny lalao hotontosaina any Maraoka amin’ny volana septambra eo amin’ny rugby lalaovin’olona fito ny fifaninanana kaontinantaly ho an’i Madagasikara. I Berthin Zoto ihany no hitantana izany.
Baolina lavalava, Mpanoratra Rijakely, 10.07.2012, 09:25	FIARAHAMONINA